isigama sokuvavanya ukusebenza
Eyona Ukusebenza Isigama sokuVavanya ukuSebenza
Apha ngezantsi kukho uluhlu lwesigama sovavanyo lwentsebenzo oluqhelekileyo:
Ukwenza ifayile ye- isiseko yinkqubo yokuqhuba iseti yeemvavanyo ukufaka idatha yedatha yokusebenza ngenjongo yokuvavanya ukusebenza ngempumelelo kotshintsho ekuphuculeni intsebenzo kwinkqubo okanye usetyenziso.
Ukuthelekisa yinkqubo yokuthelekisa indlela yokusebenza kwenkqubo yakho ngokuchasene nesiseko osenzileyo ngaphakathi okanye ngokuchasene nomgangatho womzi mveliso owamkelwe ngumbutho othile.
Inkqubo ye- umthamo yenkqubo ngumthwalo wonke womsebenzi onokuwuphatha ngaphandle kokophula umiselo lwendlela yokusebenza eyamkelweyo.
UKUYA uvavanyo lobungakanani ugcwalisa uvavanyo lomthwalo ngokumisela indawo yakho yokugqibela yokusilela kwiseva, ngelixa ukuvavanywa komthwalo kuvavanya iziphumo kumanqanaba ohlukeneyo omthwalo kunye neepateni zendlela.
Uvavanya uvavanyo ngokudibeneyo nokucwangciswa kwamandla, owasebenzisela ukucwangcisela ukukhula kwexesha elizayo, njengokunyuka kwesiseko somsebenzisi okanye umthamo owandisiweyo wedatha. Umzekelo, ukulungiselela imithwalo yexesha elizayo, kuya kufuneka uyazi ukuba zingaphi izixhobo ezongezelelweyo (ezinje ngomthamo weprosesa, ukusetyenziswa kwememori, umthamo wediski, okanye ibhendi ye-bandwidth) eziyimfuneko ukuxhasa amanqanaba okusetyenziswa kwexesha elizayo.
Ukuvavanywa komthamo kukunceda ukuba uchonge isicwangciso-nkqubo sokulinganisa ukuze uqiniseke ukuba kuya kufuneka ukhule okanye ulinganise.
An uvavanyo lokunyamezela Luhlobo lovavanyo lwentsebenzo olujolise ekumiseleni okanye ekuqinisekiseni ukusebenza kweemveliso eziphantsi kovavanyo xa ziphantsi kwemodeli zomthwalo kunye nomthamo womthwalo olindelwe ngexesha lokusebenza kwemveliso ixesha elide. Uvavanyo lokunyamezela siseti yokuvavanywa komthwalo.
Uphando Ngumsebenzi osekwe ekuqokeleleni ulwazi olunxulumene nesantya, ukungakhuli, kunye / okanye iimpawu zozinzo zemveliso ephantsi kovavanyo enokuba nexabiso ekumiseleni okanye ekuphuculeni umgangatho wemveliso. Uphando luhlala lusetyenziselwa ukungqina okanye ukuphikisa ii-hypothesis ngokubhekisele koonobangela bengxaki enye okanye engaphezulu yokusebenza.
Ukubambezeleka ngumlinganiso wokuphendula omele ixesha elithathayo ukugqiba ukwenziwa kwesicelo. Ukubambezeleka kungabonisa isambuku semilinganiselo emininzi okanye imisebenzi engaphantsi.
Iimpawu yimilinganiselo efunyenwe ngokuqhutywa kovavanyo lwentsebenzo njengoko kubonisiwe kwinqanaba eliqondwa ngokubanzi. Ezinye iimetriki ezifumaneka rhoqo kwiimvavanyo zentsebenzo zibandakanya ukusetyenziswa kweprosesa ngokuhamba kwexesha kunye nokusetyenziswa kwememori ngomthwalo.
Ukusebenza ibhekisa kulwazi ngokubhekisele kumaxesha okuphendula kwesicelo sakho, ukuphuma, kunye namanqanaba okusetyenziswa kwezixhobo.
UKUYA uvavanyo lwentsebenzo luphando lobuchwephesha olwenziwe ukumisela okanye ukuqinisekisa isantya, ukungazinzi, kunye / okanye iimpawu zozinzo zemveliso ephantsi kovavanyo. Ukuvavanywa kokusebenza yeyona superset iqulethe onke amanye amacandelo ovavanyo lwentsebenzo oluchazwe kwesi sahluko.
Imingcele yokusebenza Awona maxabiso aphezulu amkelekileyo kwiimethrikhi ezichongiweyo zeprojekthi yakho, zihlala zichazwe ngokwexesha lokuphendula, ukuphuma (ukuthengiselana ngomzuzwana), kunye namanqanaba okusetyenziswa kwezixhobo. Amanqanaba okusetyenziswa kwezixhobo abandakanya isixa somthamo weprosesa, inkumbulo, idiski I / O, kunye nenethiwekhi ye-I / O esetyenziswa sisicelo sakho. Imingcele yokusebenza ngokulinganayo ilingana neemfuno.
Ixesha lokuphendula linyathelo lokujonga indlela esabela ngayo isicelo okanye inkqubo esezantsi kwisicelo somthengi.
Ukwanelisa ibhekisa kwindawo apho ubutyebi bufikelele ekusebenziseni ngokupheleleyo.
Ukwahluka ibhekisa kubuchule besicelo sokuphatha umthwalo owongezelelweyo womsebenzi, ngaphandle kokuchaphazela kakubi ukusebenza, ngokongeza izixhobo ezinje ngeprosesa, inkumbulo, kunye namandla okugcina.
Kwimeko yokuvavanywa kokusebenza, a imeko Ulandelelwano lwamanyathelo kwisicelo sakho. Isimo singabonisa imeko yokusebenzisa okanye umsebenzi weshishini njengokukhangela ikhathalogu yemveliso, ukongeza into kwinqwelo yokuthenga, okanye ukubeka iodolo.
UKUYA uvavanyo lomsi kukuqhutywa kokuqala kovavanyo lwentsebenzo ukubona ukuba isicelo sakho sinokwenza imisebenzi yaso phantsi komthwalo oqhelekileyo.
UKUYA uvavanyo lwespike luhlobo lovavanyo lwentsebenzo olujolise ekumiseleni okanye ekuqinisekiseni ukusebenza kweemveliso eziphantsi kovavanyo xa ziphantsi kwemodeli zomthwalo kunye nomthamo womthamo ophindaphindayo ukwanda ngaphezulu kwemisebenzi ekulindelweyo yemveliso ixesha elifutshane. Ukuvavanywa kwespike siseti yovavanyo loxinzelelo.
Kwimeko yokuvavanywa kokusebenza, uzinzo ibhekisa kukuthembeka okupheleleyo, ukomelela, ukusebenza kunye nokuthembeka kwedatha, ukubakho, kunye / okanye ukungaguquguquki kokuphendula kwenkqubo yakho phantsi kweemeko ezahlukeneyo.
UKUYA Uvavanyo loxinzelelo luhlobo lovavanyo lwentsebenzo eyilelwe ukuvavanya indlela yokuziphatha kwesicelo xa sityhalwa ngaphezulu kweemeko eziqhelekileyo okanye eziphezulu zomthwalo. Injongo yokuvavanywa koxinzelelo kukutyhila iibhugi zesicelo ezingaphezulu kuphela kweemeko zomthwalo ophezulu. Ezi bugs zinokubandakanya izinto ezinje ngemicimbi yokuvumelanisa, iimeko zobuhlanga, kunye nokuvuza kwenkumbulo.
Uvavanyo loxinzelelo lukwenza ukuba ubenako ukufumana amanqaku akho obuthathaka wesicelo, kwaye ubonise indlela isicelo esiziphatha ngayo phantsi kweemeko zomthwalo ezigabadeleyo.
Iziphumo linani leeyunithi zomsebenzi ezinokuphathwa ngeyunithi yexesha; umzekelo, izicelo ngomzuzwana, iifowuni ngosuku, ukubetha ngomzuzwana, iingxelo ngonyaka, njl.
Umthwalo womsebenzi sisishukumisi esisetyenzisiweyo kwinkqubo, usetyenziso, okanye icandelo lokulinganisa ipatheni yokusetyenziswa, ngokubhekisele kwimvumelwano yemali kunye / okanye kwigalelo. Umthwalo womsebenzi ubandakanya inani elipheleleyo labasebenzisi, abasebenzisi abasebenza ngokufanayo, ivolumu yedatha, kunye nemithamo yokuthengiselana, kunye nomxube wentengiselwano. Kwimodeli yokusebenza, unxibelelanisa umthwalo kunye nemeko nganye.
Uyintoni umahluko phakathi kwe- Uvavanyo lomsebenzi , Uvavanyo lomthwalo kwaye Uvavanyo loxinzelelo?
Ukusebenza, umthwalo, kunye novavanyo loxinzelelo ngamacandelwana ovavanyo lwentsebenzo, nganye eyenzelwe injongo eyahlukileyo.
Uvavanyo lwentsebenzo. Olu hlobo lokuvavanya lumisela okanye luqinisekise isantya, ukungahambi kakuhle, kunye / okanye iimpawu zokuzinza kwenkqubo okanye isicelo phantsi kovavanyo. Ukusebenza kuchaphazelekayo ekufezekiseni amaxesha okuphendula, ukugqitywa, kunye namanqanaba okusetyenziswa kwezixhobo ezihlangabezana neenjongo zomsebenzi weprojekthi okanye imveliso. Kwesi sikhokelo, uvavanyo lwentsebenzo lumele isethi yawo onke amanye amacandelo ovavanyo olunxulumene nokusebenza.
Uvavanyo lomthwalo. Eli candelo lincinci lovavanyo lwentsebenzo ligxile ekumiseleni okanye ekuqinisekiseni ukusebenza kwenkqubo okanye isicelo phantsi kovavanyo xa kuthotyelwa umthwalo kunye nomthamo womthwalo olindelwe ngexesha lokusebenza kwemveliso.
Uvavanyo loxinzelelo. Eli candelo lincinci lovavanyo lwentsebenzo ligxile ekumiseleni okanye ekuqinisekiseni ukusebenza kwenkqubo okanye isicelo phantsi kovavanyo xa iphantsi kwemeko ezingaphaya kwezo bezilindelwe ngexesha lokusebenza kwemveliso. Uvavanyo loxinzelelo lunokubandakanya uvavanyo olugxile ekumiseleni okanye ekuqinisekiseni ukusebenza kwenkqubo okanye usetyenziso phantsi kovavanyo xa luxhomekeke kwezinye iimeko zoxinzelelo, ezinje ngememori encinci, indawo yediski engonelanga, okanye ukusilela kweseva. Olu vavanyo luyilelwe ukumisela ukuba zeziphi iimeko isicelo esingayi kusilela kuzo, ukuba siza kusilela njani, kwaye zeziphi izikhombisi ezinokujongwa ukulumkisa ngokusilela okuzayo.
Uyilungisa njani i-digitizer ngaphandle kokutshintsha
UGoogle udlale iinyanga ezi-4 simahla
I-Apple iPhone 12 vs Google Pixel 5
Iapile kunye neapos; Intengiso yeTV yakutshanje ibonisa into ekufuneka yenziwe luKhangelo lokuKhangela ukuNgafihli
Idili: Fumana iinyanga ezi-4 zokudlala umculo kuGoogle kunye neenkonzo ezibomvu zeYouTube
Ukukopa / uncamathisela kwi-iPhone
Umhla wokukhutshwa kwefreyimu emnyama eMnyama utyhiliweyo, bhalisa kwangaphambili ukufumana iPC yasimahla okanye ikopi yekhonsoli
Ukunyusa iselfowuni kwazisa ngezicwangciso ezitsha ezingenazingcingo ezintlanu ezinexabiso eliphantsi kwe- $ 50 ngenyanga
I-LG V30 vs LG V30 +: yeyiphi & apos; umahluko?